प्रदेश-६ – Page 14 – Halkaro
वैद्य जी, विप्लव र बाबुरामसँग एकता हुन्छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रकाशित मिति : २०७३, २४ मंसिर शुक्रबार December 9, 2016
सुर्खेत, मंसिर १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार निर्वाचनको मिति घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार बिहान सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा पार्टीनिकट अगुवा कार्यकर्ताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । उनले कार्यकर्ताहरूलार्इ निर्वाचनमा लाग्न समेत निर्देशन दिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका बलिदानीपूर्ण संघर्षका उपलब्धी संस्थागत गर्न संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य […]
प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा पुगेकी बालिकाको ज्यान गयो
प्रकाशित मिति : २०७३, २४ मंसिर शुक्रबार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वागतका लागि र्‍यालीमा सहभागी छात्राको ज्यान गएको छ । वीरेन्द्रनगरमा सुरू भएको कर्णाली एक्स्पो तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला उद्घाटनका क्रममा निकालिएको र्‍यालीमा सहभागी १३ वर्षीया छात्रा समीक्षा आचार्यको बिहीबार ज्यान गएको हो । वीरेन्द्रनगरको होराइजन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत आचार्य र्‍यालीमै बेहोस भएकी थिइन्। वीरेन्द्रचौक पुगेपछि बेहोस […]
माअाेवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति ४ हजार सदस्यीय जम्बो (कुन प्रदेशमा कति केन्द्रीय सदस्य?)
प्रकाशित मिति : २०७३, २१ मंसिर मंगलवार
काठमाडौँ, मंसिर २१ । नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले केन्द्रिय महाधिवेशन आयोज समितीको संख्या एक कम चार हजार पुराउने निर्णय गरको छ । मंगलबार काठमाडौंमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले तीन हजार ९९९ सदस्यीय जम्बो केन्द्रिय समितीको प्रस्ताव पारित गरेको हो । योसँगै माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो, कार्यालय टिम र पार्टी सचिवालयसमेत बढेको छ । पोलिटब्युरो सदस्यको संख्या ३९९ […]
माअाेवादी केन्द्रको पाँच नं. प्रदेशको कमाण्ड रोल्पाका अनन्तले समाल्दै
काठमाडौँ, मंसिर २१ । संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा प्रदेश नं. पाँचमा अान्दोलनमा चर्किएको छ । यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पाँच नं. प्रदेशको कमाण्डरको रूपमा पूर्व जनसेनाका डेपुटी कमाण्डर वर्षमान पुन अनन्तलार्इ जिम्मेवारी दिएको छ । मंगलबार बसेको माअाेवादी केन्द्रको पोलिटव्यूरो बैठकले प्रदेश इञ्चार्ज र प्रदेश संयोजक चयन गरेको छ । जसमा […]
श्रीमतीले ‘की अामालार्इ मार की म भीरबाट हामफालेर मर्छु’ भने पछि अामाको हत्या गरेँः बुद्धिबहादुर
प्रकाशित मिति : २०७३, २० मंसिर सोमबार December 5, 2016
जाजरकोट, मंसिर २० । आफ्नै आमाको हत्या गर्ने सक्ला-१ लैखमका एक दम्पतीलार्इ सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएको छ । सक्ला-१ लैखमका वुद्धिबहादुर खत्री र उनकी पत्नी शर्मिला वली खत्रीले आफ्नै आमा देउमी खत्रीको हत्या गरेको पुष्टि भएपछि जिल्ला अदालत जाजरकोटका जिल्ला न्यायाधीश लिलाराज अधिकारीको एकल इजलासले आइतबार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको फैसला सुनाएको हो । नलसिंहगाड जलविद्युत् […]
अवैध गर्भबाट जन्मेको छोराको हत्या गर्ने महिलालार्इ जेल
प्रकाशित मिति : २०७३, १७ मंसिर शुक्रबार
जाजरकोट, मंसिर १५ । परपुरुषसँगको अवैध यौन सम्पर्कबाट जन्मेको बच्चालाई हत्या गरेको अभियोगमा जाजरकोटमा एक महिलालाई सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय भएको छ । जिल्लाको भेरीमालिका नगरपालिका–१३ कुदु्की कमला विकलाई जिल्ला न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीको इजलासले आफ्नै सन्तानको हत्याको अभियोगमा कमलालाई उक्त सजाय हुने फैसला गरेको हो । कमलाका पति राजु विक वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा छन् […]
मिनीट्रक दुर्घटनामा दुईको ज्यान गयो
प्रकाशित मिति : २०७३, ५ मंसिर आईतवार November 20, 2016
सुर्खेत, मंसिर ५ । रूकुम जिल्लाको काँक्रीबाट रुकुमकोटतर्फ जाँदै गरेको मिनीट्रक दुर्घटना हुँदा दुर्इ जनाको ज्यान गएको छ । बिहान ५ बजे बा १ ख ९६९१ नं को मिनीट्रक रुकुमकोट– ९ को रातापहर नजिकै दुरघटना हुँदा मारोवाङ– ३ की अन्दाजी १६ वर्षीया सपना सुनार र गाडी चालक सल्यान शिवरतका लालवीर विकको ज्यान गएको हो । […]
सुर्खेतमा १ उपमहानगरपालिकासहित ९ वटा स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : २०७३, २१ कार्तिक आईतवार
सुर्खेत, कार्तिक २१ । जिल्लामा १ उपमहानगरपालिका सहित ९ वटा स्थानीय तह बनाउने प्रस्ताब गरिएको छ । स्थानीय तह निर्धारण प्राविधिक सहमितले पाँच वटा गाँउ पालिका ५ वटा गाउँपालिका र तीन वटा नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव आयोगलाई पठाएको छ । साविकका २ वटा नगरपालिका र ३९ वटा गाविसलार्इ मिलाएर ९ स्थानीय तहको प्रस्ताव […]
स्थानीयले लुटेको हतियार प्रहरी नियन्त्रणमा केही गोली फेला परेनन्
प्रकाशित मिति : २०७३, १८ कार्तिक बिहीबार
सुर्खेत, कार्तिक १८ । स्थानीय हतियार धारी समूहले लुटेको प्रहरीको हतियार प्रहरीले फिर्ता गराएको छ । जिल्लाको आग्री गाँउस्थित देउली प्रहरी चौकीबाट स्थानीयवासीले लुटेका हतियार प्रहरीले पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक माधव नेपालका अनुसार करिब ३० जनाको संख्यामा रहेका स्थानीयले घरेलु हतियारसहित प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी प्रहरीको […]
ट्रकले ठक्कर दिँदा दुईको ज्यान गयो
प्रकाशित मिति : २०७३, ११ कार्तिक बिहीबार
बर्दिया, कार्तिक ११ । बिहीवार बिहान जिल्लाको धधवार–६ माथिल्लो वनगाई चोकमा भएको दुर्घटनामा दुर्इ जनाको ज्यान गएको छ । धनगढीबाट नेपालगन्जतर्फ जाँदै गरेको ना६ख ६२६७ नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको रा १ प ७८३३ नम्बरको मोटरसाइकलार्इ ठक्कर दिँदा दुर्इ जनाको ज्यान गएको हो । दुर्घटनामा एक जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा […]